ကျနော့်ရဲ့ ရိုက်ချက် (2) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျနော့်ရဲ့ ရိုက်ချက် (2)	8
Posted by kotun winlatt on Aug 16, 2016 in Photography | 8 comments
kotun winlatt says: အေးတာပဲ ဘာမှ မမြင်ရဘူးးး
ဗျို့ တဂျီး အချိန်ရရင် ပြင်ပေးလိုက်ဦး
ဂျစ်စူ says: ဟိုပုံတွေ မလား
ကျုပ်လို ဖုန်းကြီးတဲ့ လူပဲ မြင်ရတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: ဟုတ်တယ် ဟိုပုံတွေ . . . ကျုပ်က ဖုန်းသေးနေလို့ များလားးး
ဂျစ်စူ says: ဟိုထဲဝင်ကျတော့ တွေ့ တယ် ဂျ
ဒီထဲပြန်ကျိ မပေါ်ဘူး အဲဒါ နတ်ကိုင်တာ
နောက်ခါ ရှုခင်းတွေတင်ရင် စကီအလန်းလေးတွေ ပါအောင်ထည့်ရိုက်
kotun winlatt says: ဟေ . . . နတ်ကိုင်တာလားးး ဘာနတ်ကိုင်တာလား ၁၄ နတ်လား ၂၂ နတ်လားဟ
ဂျစ်စူ says: ဒီမှာလဲ ပေါ်လာပြီလို့အဲ လို့ စ်…
အောင် မိုးသူ says: ပြာပြာလွင်လွင်
Foolish Girl says: တိမ်တွေကိုကြိုက်တယ် ငယ်ငယ်ကတည်းက ရွေ့ရှားရင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြစ်သွားတဲ့ တိမ်တွေကိုကြည့်ရတာကိုကြိုက်တာ